အဆိုပါဒြပ်ပေါင်းဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည် 1996 Holmes မြှင့်တင်ရန်နိုင်ရန်အတွက်- gden ဖှံ့ဖွိုးတိုးတ. သူတို့လိုချင်တဲ့အတိုင်းအသင်းအဖွဲ့တွင်အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကကြိုဆိုမှ ကိုယ့် ရုံအစည်းအရုံးရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေသို့မဟုတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရိုင်အတှကျအကြိုး. အသင်းဝင်တစ်ဦးအနိမ့်ကုန်ကျစရိတ်မှာဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမဲ့ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေးအလွန်အကျိုးရှိနှင့်ကျေးလက်နေ. သင်သို့မဟုတ်သင့်မိသားစုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်လာဘယ်လိုပိုပြီးဒီနေရာမှာလေ့လာပါ.
#ShepherdsHut, မာစတာ Niklas Wikholm အားဖြင့်, ဒီ site operating – Holmbygden.se. ကျနော်တို့က်ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်တွင်သင်ချင်သောအမှုအရာအပေါ်ထင်မြင်ချက်များနှင့်အကြံပြုချက်များကြိုဆိုပါတယ် ဒီမှာ.
သင်တစ်ဦးဖြန့်ဝေချင်လျှင် “Holmes သတင်းများ”, သင်ကလုပျနိုငျ ဒီမှာ.
medlemmar ဈ #ShepherdsHut.
●ခရိုင်ဒြပ်ပေါင်းများအကြားပိုပြီးနားလည်မြှင့်တင်ရန်, ကုမ္ပဏီများမှ, အဖွဲ့အစည်းများနှင့်
BLI medlem ဈ #ShepherdsHut!
စာပို့- နှင့်တယ်လီဖုန်းစာရင်း – ကျွန်တော်တို့ရဲ့အီးမေးလ်ကိုလက်ခံရရှိရန်ဒီနေရာကိုမှတ်ပုံတင်မယ်
ပွောငျးလဲခွငျး: ငါ april 2013 နှစ်ပတ်လည်အစည်းအဝေးဖို့အသင်းအဖွဲ့ရဲ့နာမညျကိုပြောင်းလဲပစ်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည် “Holmes ခရိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ” (လွန်ခဲ့သော “Holmes ခရိုင်၏ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ, စီးပွားရေးလုပ်ငန်း & ခရီးသွားလာရေးလုပ်ငန်း”).
17/1: utah: သတိပေးခြင်းလူတန်းစား 1, နှင်း, V ကို ... အိမ်ရှေ့၏တောင်ဘက်အတွက်နှင်း ... ဆက်ဖတ်ရန်
18/1: E4 ကျွန်းသစ်-Soraker ...
Tpl Vivstavarv (232) til... ဆက်ဖတ်ရန်